Ungasarudza sei iyo kiyi yemufananidzo weRarama Photo | IPhone nhau
Maitiro ekusarudza iro rakakosha kiyi yeRararama Photo
ari Mifananidzo vanotiperekedza zuva rese, zvisinei nemudziyo upi. Izvo zvitsva zvakagadzirwa neApple mumidziyo yayo zvine chekuita nemakamera zvinoshamisa nekuwedzera ma sensors uye kugadzirisa mapfekero kunyangwe mumamiriro ane mwenje wakaderera. Asi ivo havana kungovandudza padanho rehardware asiwo padanho re software. Imwe yenyaya dzayo huru yaive mharidzo ye Rarama Mapikicha.
Iko kukanganisa kweRararama Mapikicha ndeyekuti isu hatigone kusarudza iyo furemu ndiyo hombe uye ndeipi inosara kumagumo kwekubereka kwayo. Ndokusaka nhasi tichikudzidzisa iwe Sarudza mufananidzo mukati meRarama Photo izvo zvichasara pakupera kwekutamba kwayo.
Kugadziridza Live Live kusarudza yedu keyframe
Tichatanga iko kushandiswa kwekurapa Rarama Mifananidzo nenzira yatichazviita nayo. Kana isu tikatora mufananidzo werudzi urwu, panopera kubereka mufananidzo wechando unoramba uri mufuremu. Kana isu tikaisa animated foto seyakavhara skrini kumashure, kana isu tikasabaya pairi, inoramba iri mumufananidzo uchiri Nekuti kukwanisa kuchinja iyo ichiri mufananidzo (keyframe) Tichaenda kushandisa Google Motion Stills, chishandiso cheGoogle chinotibvumidza isu kurapa Mapikicha Mhenyu nematurusi akasiyana.
Wedzera emojis kana zvinyorwa
Chinja mifananidzo kuve maGIF
Sarudza kiyi yakakosha
Tichatarisa pane ino yekupedzisira ficha. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuve neyedu Live Photo iripo uye kurodha Motion Stills kubva kuApp Store (une chinongedzo kumagumo kweichi posvo). Tevere isu tinotevera akateedzana nhanho.
Vhura iyo application uye sarudza iyo Live Photo iwe yaunoda kugadzirisa.
Paunenge uchinge uri mukati, tinya pane bhatani rekutengesa riri mune yepazasi kurudyi chikamu cheiyo skrini
Ipapo iwe unenge uine sarudzo dzinoverengeka, tinya Export Rarama Mufananidzo
Bhawa ichaonekwa kuti iwe unogona kufamba kusvikira wawana iyo keyframe yeako Mhenyu Photo, iwo mufananidzo unozosara kana iwe usiri kufamba kana munzvimbo yausingakwanise kutambwa zvekare
Export mufananidzo, unozochengetwa pane rako reel.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekusarudza iro rakakosha kiyi yeRararama Photo
Gaston kugomera akadaro
Iwe haudi iyo Google application, kugadzirisa iyo yemahara pikicha neyeMapikicha application, iwe sarudza iyo pikicha uye nhema bhokisi rinowonekwa pamusoro peiyo foto iyo inoti "sepakutanga foto".
Pindura Gastón Groel
Ndine urombo "rarama" (kwete mahara).
Hutano hwebhatiri pane iOS, zvese zvaunoda kuti uzive nezvazvo
Avalanche yekunyepedzera iTunes kutenga munyika dzeAsia